नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : मेलम्चीका १७ वर्ष : २५ अर्ब लगानी सवा दुई अर्ब भ्रष्टाचार !
मेलम्चीका १७ वर्ष : २५ अर्ब लगानी सवा दुई अर्ब भ्रष्टाचार !
स्थानीय जनताको सामाजिक उत्थानका नाममा एक अर्ब ८७ करोड, छानबिन गर्न महालेखाको सिफारिस
- पुष्प ढुंगाना
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भेटिएको छ । कुल २५ अर्ब २० करोड खर्च हुँदा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ । महालेखाले सो रकम संलग्न पदाधिकारी र इन्जिनियरबाट असुल्न सिफारिस गरेको छ । आयोजना सञ्चालन अवधिमा थप १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ
अनियमितता भएको पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।
गत वर्ष आयोजनाले सुरुङ तथा हेडवक्र्स निर्माणका लागि इटालीको सिएमसी कम्पनीसँग ६ अर्ब ७१ करोड ६० लाखमा ठेक्का सम्झौता ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न पाइँदैन । जसअनुसार आयोजनाले सिएमसीको ठेक्काका लागि परामर्श सेवामा एक अर्ब ७४ लाखसम्म मात्र खर्च गर्न पाउँछ । त्यसभित्र भेरिएसन खर्च, क्षतिपूर्ति खर्च, दाबीलगायत भुक्तानी पर्छन् । तर, आयोजनाले यसमा झन्डै दोब्बर खर्च देखाएको छ । यो अनियमितता हो । उसले भेरिएसन शीर्षकमा ५१ करोड ९४ लाख खर्च देखाएको छ । ‘एडजस्टमेन्ट फर चेन्चेज इन कस्ट’ शीर्षकमा ४९ करोड २३ लाख र दाबीबापत एक अर्ब ६ करोड खर्च लेखेको छ । त्यस्तै रिम्बलसेवल कस्टबापत पाँच करोड २० लाख, एक्सेस डे वक्र्सबापत १८ करोड २० लाख खर्च लेखेको छ । यसरी परामर्श सेवा शीर्षकमै आयोजनाले दुई अर्ब २६ करोड खर्च देखाएको छ । खर्च गर्न पाउनेभन्दा बढी एक अर्ब २५ करोड खर्च लेखेको भन्दै महालेखाले छानबिन गर्न सुझाब दिएको छ ।
आयोजनाका लागि छुट्याएको पैसाबाट महँगा विलासी गाडी किन्दै शक्तिकेन्द्रमा बाँडेको भेटिएको छ । लेखापरीक्षणको तथ्यांकअनुसार मात्र मेलम्ची आयोजनाले १७ वटा त्यस्ता महँगा गाडी खरिद गरेर बाँडेको छ । आठवटा टोयोटा प्राडो किनिएको छ । तीमध्ये दुई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, दुई खानेपानी मन्त्रालयमा, दुई सहरी विकास मन्त्रालयमा, एउटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा र एउटा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा दिइएको छ । त्यस्तै एउटा टोयोटा ल्यान्डक्रुजर जिप खानेपानी तथा सरसफाइ विभागलाई, एउटा कार सहरी विकास मन्त्रालयलाई, एउटा कार खानेपानी मन्त्रालयलाई दिइएको छ । एउटा टोयोटा हाइलक्स जिप मेलम्चीस्थित सैनिक क्याम्पलाई, एउटा टोयोटा हाइलक्स पिकअप इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीलाई, एउटा निसान पिकअप सशस्त्र प्रहरी मेलम्ची क्याम्पलाई र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई एउटा टोयोटा कोरला कार आयोजनाले दिएको छ । - नयाँ पत्रिका